लघुकथा : आवरण | Himal Times
Home सिर्जना लघुकथा : आवरण
साउन महिना , मौसम हरियाली थियो । अन्तिम सोमबार, शिवको मन्दिर परिसर निकै झकिझकाउ थियो । दीन दु:खी पनि धर्मात्माहरुबाट केही पाइने अाशले लहरै बसेका थिए । झट्ट हेर्दा ठुलै उत्सव थियो । विशेष चहलपहल, अघिपछि भन्दा निकै भव्य र निकै रोचक देखिन्थ्यो ।
एउटी सभ्य देखिने महिला भब्य गाडीबाट अोर्लिन् । उनी जनकल्याण सँघकी अध्यक्ष थिइन् । उसो त उनले कहिले जीवनमा मन्दिर र पूजा गरेको थाहा थिएन ।
उत्तिखेरै दुईजना लाठेहरुले उनले दानका लागि ल्याएका कम्बल, लत्ता कपडा र खानेकुरा बोकेर उनका पछि लागे । निकै दानधर्मको भावले सबैलाई वितरण गर्दै गइन् ।
एकजना दु:खीले बिन्ति बिसायो – हजुर , छोरो अस्पतालमा छ । नगद सहयोग पाए ठुलै उद्धार हुने थियो । उनले तत्कालै केही नगद सहयोग दिइन्। नगद हातमा परेर ऊ दङ्ग पर्यो ।
मन्दिरको व्यवस्थापन र संरक्षणलाई पनि भनेर मोटै रकम चेक काटिन् । सबै दु:खी अात्माहरुले उनको जयजयकार गर्दै थिए । दर्शकहरु पनि अाशीर्वाद वर्षाउँदै थिए । टीकाटिप्पणी चल्दै थियो – “धन पनि भाकी , मन पनि भाकी रहिछिन्´´ ।
अचानक प्रकृतिको कुदृष्टि बर्सियो । भारी वर्षा चल्यो । निमिषभरमै छेउको खोलो उर्लिएर मन्दिरभित्रै बाढी बनेर पस्यो । ज्यान जोगाउने होडमा भागदौड , हँगामा , कोलाहल मच्चियो ।
गरीब दु:खीलाई पन्छाउँदै उनै दानी र सज्जन महिला गाडीमा चढ्दै अाफ्नो घरको गेट मात्रै के पुगेकी थिइन् , अघिका केही मगन्तेहरू उनको घरमा शरणका लागि अनुनय विनय गर्दै थिए । उनले गेटभित्र अनुमतिबिना प्रवेश निषेधको बोर्ड टाँसेर सबैलाई हकार्दै थिइन् -“यो धर्मशाला होइन , जान्छौ कि पुलिस बोलाऊँ ? ”
भिडबाट एक जनाको आवाज आयो – “दिदी अघिका मिडियाकर्मीलाई फोन गरेर बोलाऊँ या भित्र पस्न दिनुहुन्छ ´´?
तीनकुने , काठमाडौं
Previous articleकाेराेना जाेखिम नहुने गरि संसद सञ्चालन गर्ने बारे सभामुखकाे छलफल
Next articleदिवेश पाेखरेल अमेरिकन आईडलकाे उत्कृष्ट १० मा
मलेसियाको ट्रेन्ड टेक्नोलोजीका नेपालीहरुद्वारा खुट्टा गुमाएका उमेशलाई आर्थिक सहयोग
नेकपा उपाध्यक्ष गौतमको ” यो मुक्त भूमि, हो बुद्दभुमी” गीतको भिडियो सार्वजनिक (भिडियो)